Booliska Sare! Ha eegin shaashadda iPhone X | Wararka IPhone
Booliska Sare! Ha eegin shaashadda iPhone X
Waxay u egtahay kaftan laakiin waa run oo waa iyadoo la fiirinayo shaashadda iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max ama iPhone XR (marka la iibinayo) waxay noqon kartaa dhibaato ka jirta baaritaanka booliska marka tuhmanaha uu leeyahay mid ka mid ah terminaalkan oo leh aaladda aqoonsiga Face ID.
Dhamaanteen waan wada xasuusanaa sawirkaas Craig Federighi oo masraxa "weji duruufo leh" markii iPhone X ee la soo bandhigay 2017 aan isla markiiba la furin isla markaana ciladdu aysan ahayn guul darraysiga dareemayaasha su'aasha laga qabo, laakiin markii hore Aqoonsiga Face-ka wuxuu isku dayay inuu furo wejiyo kale ugu dambeyntiina dhowr diidmo kadib (xusuusnow in hal weji keliya la diiwaangelin karo) IPhone X waa la xannibay oo kaliya wuxuu ka jawaabey lambar lambar.
PARIS, FRANCE - NOVEMBER 03: Qof macaamil ah ayaa adeegsanaya barnaamijka cusub ee aqoonsiga wejiga ee Apple iPhone X, nuuca cusub ee casriga casriga ah ee Apple Store ee Apple Store Saint-Germain bishii Nofeembar 3, 2017 magaalada Paris, France. Apple X kii ugu dambeeyay ee Apple wuxuu leeyahay farsamada aqoonsiga wajiga, 5.8 inji dherer-ilaa-gees sare ah oo OLED ah iyo kamaradaha hore iyo gadaal oo kaamil fiican leh oo xasilinta muuqaalka. (Sawirka Chesnot / Getty Images)
Koodhka caadiga ahi waa 6 lambar waana dhibaato kale
Marka baaritaanka suurtagalka ah ee tuhmanaha haysta iPhone X ama goor dambe waxaa muhiim ah in masuuliyiintu aysan si toos ah u eegin taleefanka casriga si uu u xirnaado ilaa iyo hadhow way adkaan doontaa in la helo xogta loo adeegsan karo dambiga loo haysto qofka xidhan. Dhowr toddobaad ka hor waxaan aragnay sida booliisku u yahay loo adeegsaday Aqoonsiga Face si loo furo iPhone X tuhmanaha In kasta oo tani aysan "ahayn mid gebi ahaanba sharci ah" haddana ma jiro sharci xakameynaya, sidaas darteed waxay heleen macluumaadka loo baahan yahay waana intaas. Haddii ay dhacdo in wakiilka ama wakiillada ay si toos ah u eegeen iPhone-ka, waxaa lagu xiri lahaa lambarka.
Warbixinta gudaha, booliisku waxay leeyihiin tilmaamo ku saabsan sida loo dhaqmo haddii tuhmanaha uu leeyahay iphone leh aaladda dareemayaasha aqoonsiga. Waxay umuuqataa mid lagu qosli karo laakiin runti ilaa sharcigu uusan xakamaynaynin ficilka noocan ah masuuliyiintu waxay u adeegsan karaan faaruqintan sharciga ah inay ku helaan faahfaahinta qalab, haa ilaa iyo inta aysan xayirin ka dibna u baahan inay isticmaalaan koodhka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone X » Booliska Sare! Ha eegin shaashadda iPhone X
Qoryo badan dijo
Jordi Giménez, noqo tan dhaliil wax dhiseysa….
Si ka fiican ayaa wax looga qoraa tiknoolajiyadda aanad ku xumayn, laakiin runtii saaxiib ... waxaad ku lumaysaa arrimaha sharciga oo ma yara ...
Dhacdo ahaan ... iguma haboona aniga inaan sharrax ka bixiyo waxa sharci ah ama aan ku jirin arimahan "hawlgalka" ah.
Adobe ayaa ku dhawaaqday Photoshop CC ee iPad-ka iyo barnaamijyo cusub oo loogu talagalay xirfadlayaasha hal-abuurka ah